Electron inomira kutsigira 32-bit architecture | Linux Vakapindwa muropa
Electron inomira inotsigira 32-bit mapurani
ari Electron papuratifomu vanogadzira vazivisa kuti chikuva chamira kutsigira 32-bit Linux masisitimu uye vakarega kuvakira magungano. Chiziviso hachireve kana danho iri richikanganisa chete x86 dhizaini kana inowedzera kutsigira maARMv7 masystem (anoratidzwa ne "32-bit Linux").
32-bit Linux rutsigiro ichamiswa senge vhezheni 5.0 (Sekureva kwepamutemo kuburitswa papepa 4.0, asi iyi typo, sekutsigirwa kuzere kwe32-bit Linux yakapihwa muna Zvita, senge yanhasi yekuvandudza 4.0.7).
1 Chii chinonzi electron?
1.1 32 bit inokanganikwa zvishoma nezvishoma
Chii chinonzi electron?
Kusiyana newebhu-based application, Electron-based programmes inoendeswa semafaira akapatsanurika asingabatanidzwe kubrowser.
Electron inopawo maturusi ekuronga otomatiki kuendesa uye kumisikidza zvekuvandudzwa (zvigadziriso zvinogona kuunzwa kubva kune rakasiyana server uye zvakananga kubva kuGitHub).
Hwerengedzo ye730 mafomu anotumirwa muElectron software katalog.
32 bit inokanganikwa zvishoma nezvishoma
Iyo yazvino yekuvandudza, iyo makumi matatu nemaviri-bit vhezheni yeLinux ichaumbwa, ichave vhezheni 32 (iyo inoburitswa inotaura kuti 3.1).
Vagadziri vezvishandiso zvinoenderana nepuratifomu yeElectron vanofanirwa kuzvikwanisira kune makumi matanhatu neshanu anovaka Linux kana kugara pane vhezheni 64 (yakaratidza 3.1), inozosara kusvika pakuumbwa kwebazi reElectron 7.0 (yakaratidza 6.0).
Vashandisi ve32-bit Electron application vanokurudzirwa kuti vashandure kune 64-bit masisitimu.
Electron icharega kutsigira 32-bit Linux kutanga neElectron v4.0. Iyo yazvino vhezheni yeElectron iyo inotsigira 32-bit based kuisirwa kweLinux ndiyo Electron v3.1, iyo ichagamuchira rutsigiro kuburitswa kusvikira Electron v6 yaburitswa. Tsigiro ye64-bit based Linux ichaenderera isina kuchinjika.
Mazhinji emakomputa akagadzirwa muma1990 uye kutanga kwema2000 akagadzirwa nemaCPU aive akavakirwa padanho re32-bit, nepo makomputa mazhinji akagadzirwa gare gare aive akavakirwa kune yekare 64-bit kuvaka. Nyowani uye ine simba.
Iyi sarudzo inotorwa nevagadziri veElectron yakavakirwa pachokwadi chekuti parizvino kudiwa kwekuvakwa kwema32-bit hakuna kunyanya sevamwe kunze kweizvozvo ivo vanotozviona se "chakare" tekinoroji.
Uye kune rimwe divi izvo zvakare zvatova mazhinji makuru mapurojekiti aenda pasina kushandisa nguva uye nesimba mukuvandudza kweichi chivakwa.
Nekuda kweizvozvo, rutsigiro rwave kudzikira: Google yakamira kuburitsa Chrome ye32-bit Linux munaKurume 2016, Canonical yakamira kupa 32-bit desktop mifananidzo muna 2017, uye yakadonhedza 32-bit rutsigiro zvachose neUbuntu 18.10. Arch Linux.
Tichifunga izvi, isu tinoona kuti chimwe chakakosha chakavhurwa sosi purojekiti yakabatana neichi chirongwa chekusiya kuvandudzwa kwe32-bit kuvaka.
Uye izvo zvakakoshawo kuyeuka zvakataurwa nevakagadziri veUbuntu Mate mune izvo chaizvo "musika weichi chivakwa hausisiri kushandiswa, sezvo vashandisi vanosarudza kurodha 32-bit mufananidzo vashandisi vanoiisa pamakomputa ane 64-bit processor."
mabviro: electronjs blog
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Electron inomira inotsigira 32-bit mapurani